काठमाडौं उपत्यकामा तीन नयाँ संक्रमित- नर्सदेखि पूर्वमन्त्रीका सुरक्षाकर्मीसम्म – Health Post Nepal
काठमाडौं उपत्यकामा तीन नयाँ संक्रमित- नर्सदेखि पूर्वमन्त्रीका सुरक्षाकर्मीसम्म
२०७७ वैशाख ३१ गते ११:३१
लामो समयदेखि नयाँ संक्रमित नदेखिएको उपत्यकामा मंगलबार एकै दिन तीन जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। एकैदिन ८३ नयाँ संक्रमित भेटिएपछि सबैको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान परीक्षण सुरू भएको छ।
उपत्यकाका तीन संक्रमितमध्ये दुई जनाको उपत्यकाबाहिरको ट्राभल हिस्ट्री देखिएको छ भने एक जनाले दिएको विवरणमा शंकास्पद देखिएको इपिडिमियोलिजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुले जनाएको छ।
पहिलो संक्रमित पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका जवान हुन्। उनी चाँगुनारायण नगरपालिका-१ का बासिन्दा हुन्।
दोस्रो संक्रमित भक्तपुर बस्ने एक जना नर्स हुन्। उनी केहीदिनअघि सुनसरीबाट फर्किएको भेटिएको महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेले बताए। निजी अस्पतालमा कार्यरत ती नर्सका सहकर्मीसहित अन्य कर्मचारीको समेत परीक्षण भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ।
तेस्रो संक्रमित महिला कन्चनपुरबाट काठमाडौं फर्किएकी हुन्। उनी नेपालगञ्जमा पुगेर आफन्तको घरमा समेत बसेको पाइएको नेपालगञ्जको टिम पनि कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा लागेको उनले बताए।
संक्रमित तीनै जनालाई हाल टेकु अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले अस्पतालमा भर्ना गरिएको अर्का एक शंकास्पदको समेत नमूना परीक्षण भइरहेको जनाकारी दिए।
रावलको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका २७ वर्षीय जवान एक महिनादेखि घरबिदामा थिए।
अस्पतालले श्रीमतीलाई डिस्चार्ज दिएपछि उनी चाँगुनारायण नै गएका थिए। ‘हामीले सोध्दा उनी त्यहाँबाट बाहिर कतै गएको बताएनन्,’ स्रोतले भन्यो।
सशस्त्रको बलम्बुस्थित कोरोना अस्पतालमा उनको वैशाख २९ गते आरडिटी परीक्षण गरिएको थियो। ‘त्यहाँ आरडिटी परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएपछि पिसिआर टेस्ट गर्न टेकु लगिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।
रावलको सुरक्षा स्रोतका अनुसार ती युवा श्रीमती बिरामी भएपछि वैशाख २ गते आकस्मिक बिदा लिएर घर गएका थिए। चाँगुनारायणबाट उनी श्रीमतीसँग चार दिनसम्म ठिमीस्थित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा बसेका थिए।
युवाका एक छोरा छन्। उनको पुरानो घर रामेछाप हो।
चाँगुनारायणमा घर बनाएपछि उनी श्रीमती र छोरासाथ बसिरहेका थिए।
स्रोतका अनुसार ती युवाको बिदा स्वीकृति पनि भएको छैन। आकस्मिक बिदामा बसेकाले स्वीकृति प्रक्रिया नटुंगिकन उनी घर गएका थिए।
बिदा सकेर डिउटी फर्किन खोज्दा उनलाई कोरोना परीक्षणमा पठाइएको थियो।
रावलले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका वा अन्य व्यक्तिहरूलाई बाहिर गएर फर्किएपछि परीक्षण गरेर मात्र काममा संलग्न गराउने नियम बनाएका छन्। ‘बिदामा गएपछि अनिवार्य परीक्षण गरेपछि मात्र काममा संलग्न हुने नियम नै बनाएको छु, उहाँ डिउटी आउन खोज्दा टेलिफोनमै परीक्षण गरेर मात्र फर्किन भनिएपछि परीक्षणमा जानुभएको हो,’ रावलले हेल्थपोस्ट नेपालसँग भने।
ती युवालाई उपचारको लागि टेकु अस्पताल पठाइएको छ। उनको बुधबार नै पुन: परीक्षण गरिँदैछ।
उनीसँग निकट रहेका श्रीमती र छोरालाई तुरुन्तै परीक्षण आवश्यक देखिएको छ। दुबैलाई परीक्षणमा लैजाने तयारी भइरहेको चाँगुनारायण-१ का वडाध्यक्ष राजेश खड्काले बताए।
बिदामा रहँदा उनले श्रीमती र छोराबाहेक क-कसलाई भेटे ‘ट्रेसिङ’ भइरहेको खड्काले बताए।
रावलले एक महिनादेखि ती सुरक्षाकर्मी आफ्नो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहेको बताए। ‘उहाँ एक महिनादेखि हाम्रो सुरक्षा टिममा संलग्न हुनुभएको छैन,’ रावलले भने, ‘मेरो परीक्षण भइसकेको छ, कोरोना नेगेटिभ छ। उहाँसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण गर्न आवश्यक देखियो।’
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण श्रेष्ठका अनुसार ती युवा घरबिदाबाट डिउटी फर्किनुअघि परीक्षणमा पठाइएको थियो।